Netwọk mmekọrịta Parler na-arụ ọrụ ọzọ otu ọnwa gachara | Gam akporosis
Ọbụna ndị na-amaghị Parler anụla banyere netwọk mmekọrịta a na-arụrịta ụka n'izu ndị gara aga. Otu ọnwa gara aga ama nke dị ezigbo njọ ọgba aghara na Capitol si United States. Fọdụ omume mbibi nke bụ tupu na mgbe na akụkọ ihe mere eme nke North America. Nakwa na dị ka anyị maara nke ọma, ha gaara enwe atụmatụ ha, nhazi na usoro ogbugbu site n'aka Parler.
okwu na-akọwapụta onwe ya dị ka netwọkụ mmekọrịta ọzọ na enweghị njikọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Mana nke bụ eziokwu bụ na ọ mechara bụrụ ebe ndị nchekwa kachasị egwu na-ekerịta atụmatụ dị egwu. Mgbe omume ihere ndị a gasịrị, sava niile ebe ọ nọrọ nọ na-akwụsị ịrụ ọrụ na-eme ka ngwa ahụ daa ruo mgbe ọ ga-apụ kpamkpam. O yikwara ka ọ dị ọzọ Parler nwere ike ịmalite ọrụ ọzọ.
Na-ala azụ mgbe otu ọnwa gachara ọrụ
Nkwupụta site na ngwa ahụ bụ na Ọ na-arụ ọrụ ọzọ maka ndị ọrụ edebanyere aha. N'oge a niile Profaịlụ pụtara dị ka ekepụtara ọhụrụ ma hichapụ ederede niile gara aga. Na ụfọdụ ndị ọrụ enwewo ike ịmalite ịme ọhụụ ọhụrụ. Mmemme ụlọ nwetara nnukwu mkpa n'etiti ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, karịsịa n’etiti ndị na-arụrịta ụka na ndị na-arụkarị ọrụ. Akaụntụ dị na netwọk dị ka Twitter ma ọ bụ Facebook ka egbochiri maka ịkwanyereghị ụkpụrụ nke ọ bụla ùgwù.
Site na gọọmentị United States a na-enyocha yaEbe ọ bụ na ọgba aghara Jenụwarị Ebee ka ego maka netwọkụ mmekọrịta a si?. Yabụ, dabere na data enwetara, Parler Enwere m ike ịgụ ọtụtụ awa. Ọ bụ ezie na yana arụmọrụ nwere oke oke, Parler nwara ikwusa nke ahụ n'ime izu ole na ole ọ ga-ekwe omume ịnakwere ndebanye aha ndị ọrụ ọhụrụ.
Otu ihe dị mkpa nke mere na Parler enwebeghị nkwado zuru oke bụ mmachi nke nnukwu ụlọ ahịa ngwa ahụ. Dika aturu anya ya, ruokwa mgbe ndi ochichi ga enye ikike enweghi ikike, site na Playlọ Ahịa Google Play ngwa a kwụsịtụrụ. N'otu aka ahụ, n'ime App Store site na Apple, Anyị ahụghị App ahụ dịkwa. N'ezie n'oge na-adịghị anya, anyị ga-enweta akụkọ banyere njedebe ikpeazụ nke Parler, ma obu banyere ukwu ka ihe omume, ee, ya na ochichi nke ahụ na-ekwe nkwa nchekwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Netwọk mmekọrịta Parler na-arụ ọrụ ọzọ